राप्रपाको अध्यक्षमा चुनाव हारे पछि ज्ञानेन्द्र शाहको नामै तोकेर यसरी भड्किए कमल थापा - Khabar Nepali
होमपेज / Special and Breaking / राप्रपाको अध्यक्षमा चुनाव हारे पछि ज्ञानेन्द्र शाहको नामै तोकेर यसरी भड्किए कमल थापा
के गर्लान् अब कमल थापा ?
आइतबार, मङि्सर १९, २०७८	, खबरनेपाली संवाददाता
राप्रपा अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन निर्वाचित भएका छन् । आज बिहान सकिएको मतगणनाअनुसार लिङ्देन अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । राजेन्द्रले एक हजार आठ सय ४४ मत ल्याएका छन् । उनले अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार कमल थापालाई हराएका छन् । थापाले जम्मा एक हजार छ सय १७ मत ल्याएका थिए । चार सय १३ मत बदर भएको थियो । लिङ्देनले सुरूदेखि नै मतगणनामा अग्रता लिएका थिए ।
अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार थापाले पराजय स्वीकार गर्ने बताएका छन् । आज बिहान ट्वीट गर्दै अध्यक्षमा लिङ्देन जितेकोमा बधाई पनि दिएका छन् । तर आफ्नो जीतमा पुर्वराजाको हात रहेको लेख्दै कमल थापा फेसबुकमा भड्किएका छन् । राप्रपाको महाधिवेशनको आसपासमा पुर्वराजा ज्ञानेन्द्रले कमल थापालाई साथ नदिएका समाचारहरु बाहिरिएका थिए । तर सो बारेमा ज्ञानेन्द्र शाह र कमल थापा कसैले पनि स्पष्ट जानकारी भने दिएका थिएनन् ।
तर चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुने बित्तिकै कमल थापाले भड्किएर फेसबुकमा स्टाटस लेख्नुमा ज्ञानेन्द्र शाहले कमल थापालाई साथ नदिएको समाचारहरु सत्य थिए भन्न सकिन्छ । फेसबुकमा कमल थापाले लेखेका छन् । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु । यसरी ज्ञानेन्द्र शाहको कदमलाई लिएर सार्वजनिकरुपमा कमल थापाले आलोचना गरेको यो पहिलो पटक हो । उनले पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु भनेर राजनीतिकरुपमा निन्दा गरेका छन् ।
कमल थापाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ज्ञानेन्द्र शाहको नाममा रहेको एकाउन्टलाई मेन्सन समेत गरेका छन् तर सो आइडी ज्ञानेन्द्र शाहले नै चलाउने हुन् वा अरु कसैले चलाउने हुन् भन्ने आजसम्म जानकारीमा नआइसकेको भए पनि कुनै बेला पुर्वराजाका निकटस्थहरुले सो आइडी फेक भएको बताएका थिए तर फेक आइडी नै भए पनि कमल थापाले सोही आइडीलाई नामै तोकेर स्टाटस लेख्नुले कमल थापा कति भड्किएका र रिसाएका छन् भन्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।
कमल थापाले लेखेका छन् – ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता आत्मसात गर्दै राप्रपा अध्यक्ष पदको निर्वाचनमा भएको पराजय सहर्ष स्विकार गर्दछु । नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई वधाई तथा शुभकामना । प्रतिकुल परिस्थितिमा समेत हामी माथि विश्वास र भरोसा गर्ने पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुमा आभारी छु । पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा निर्मल निवासको नाङ्गो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्दछु । Congrats @GBBShah . Thank you मैले राहत र उन्मुक्ति पाएको छु । सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला शिरमा कफन बाँधेर २०६३ साल देखि राजसंस्था बोकेर हिँडेको पुरस्कार आज पाईयो । सो एजेण्डाको मुल संवाहकलाई राजनीतिकरुपमा समाप्त पार्न गरिएको चेष्टाले राजाको भलो होस् । हार्दिक शुभ-कामना ।’